Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Saint Kitts sy Nevis Breaking News » 75% ny St Kitts sy Nevis lasibatra vaksiny ny mponina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Saint Kitts sy Nevis Breaking News • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Amin'ny maha-nosy lavitra roa any amin'ny faritr'i Karaiba, St Kitts sy Nevis dia nanao fandrosoana nandritra ny taona maro mba hananganana toekarena mizaka tena. Ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny firenena dia miankina amin'ny fizahan-tany.
Ny governemanta St Kitts sy Nevis dia nandany 18 tapitrisa dolara mahery hiadiana amin'ny areti-mifindra COVID-19.
Ny telo ampahefatry ny lasibatra St Kitts sy Nevis dia vita vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-19 voalohany.
Nisaotra koa ny praiminisitra St Kitts sy ireo mpiara-miasa amin'i Nevis roa tonta noho ny fahalalahan-tanana tamin'ny fanomezana vaksininy.
St Kitts sy Nevis dia nandany vola mitentina 18 tapitrisa dolara amerikana hanatanterahana ny fepetra hanakanana ny fihanaky ny valanaretina COVID-19, hoy ny praiminisitra Timothy Harris nandritra ny valan-dresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety. Nanampy izy fa ny vola dia ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny fiara, paroasy, toerana misy ny quarantine ary fanampiana amin'ny fitiliana. Tonga ny vaovao raha nanambara ny praiminisitra fa vita vaksiny voalohany amin'ny maherin'ny 75 isan-jaton'ny mponina kendren'ny federasiona tamin'ny herinandro lasa teo.
St Kitts sy ny praiminisitra Nevis Timothy Harris
Raha ny filazan'ny praiminisitra Harris dia vola dimy tapitrisa dolara amin'ity fikarakarana ara-pahasalamana ity no holaniana amin'ny faran'ny taona. Izany dia hahatonga ny totalin'ny fandaniana COVID-19 mifandraika amin'ny 23 tapitrisa dolara amerikana.
Nandritra ny adiresy virtoaly nataony tao amin'ny UN General Assembly, dia nanambara izy fa mila manohy mampiasa vola amin'ny rafitry ny fahasalamana maharitra. “Mino mafy izahay fa tsy misy olona voaro raha tsy milamina ny rehetra. Izany dia mitaky fahazoana miditra amin'ny vaksiny sy vokatra ara-pitsaboana hafa, "hoy ny praiminisitra. “Nandray andraikitra izahay tamin'ny fanomezana programa fiarovana sosialy ho an'ireo sahirana. Eny tokoa, nampihatra fonosana stimulus COVID-120 EC $ 19 tapitrisa izahay. Nahenanay ny hetra miditra amin'ny orinasa ho an'ny mpampiasa mba hitazonana ny 75% amin'ny mpiasa ary nampiditra ny VAT sy ny fandavana ny hetra ho an'ny vokatra mifandraika amin'ny areti-mandringana. ”
Nisaotra koa ny praiminisitra St Kitts sy Nevismpiara-miombon'antoka roa tonta amin'ny fahalalahan-tanana amin'ny fanomezana vaksininy. Ny minisitry ny raharaham-bahiny Mark Brantley, izay tany New York noho ny UNGA, dia nisaotra ny praiminisitra indianina Narendra Modi noho ny fanamorana ny fizarana vaksinin'ny COVID-19, izay nolazainy fa nahafahany nanatrika io hetsika io.
Amin'ny maha-nosy lavitra roa any amin'ny faritra Karaiba, St Kitts sy Nevis dia nanao dingana nandroso nandritra ny taona maro mba hananganana toekarena mizaka tena. Ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny firenena dia miankina amin'ny fizahan-tany. Taorian'ny fihidiana sy ny fijanonan'ny indostrian'ny fizahantany dia namboarina tamin'ny alàlan'ny Fandaharam-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola (CBI).
Amin'ny alàlan'ny CBI, ireo mpampiasa vola vahiny manan-kaja izay manana fahazotoana mendrika dia raisina an-tanindrazana mba hahazoany zom-pirenena sarobidy St Kitts sy Nevis ho takalon'ny fandraisana anjara ara-toekarena. Ny safidin'ny famatsiam-bola dia manome ny làlana mahomby indrindra mankany amin'ny zom-pirenena faharoa.
Manintona an'i St Kitts sy Nevis ireo mpampiasa vola satria demokrasia maoderina azo antoka sy azo antoka. Izy io dia sady mpianakavy sy mpamatsy vola no ahafahan'ny olom-pirenena mahazo fivezivezena manerantany mora, manova ny hareny ary manana Plan B.